चुनावको सबै तयारी पूरा, मतदानमा सहभागी हुन आयोगको आग्रह. – Sabaikoaawaj.com
चुनावको सबै तयारी पूरा, मतदानमा सहभागी हुन आयोगको आग्रह.
मङ्लबार, असार १३, २०७४ 9:14:06 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं, १३असार / निर्वाचन आयोगले बुधबार हुने चुनावमा मतदान गर्न मतदातालाई अनुरोध गरेको छ । आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का मतदाताका लागि बुधबारको दिन आफ्नो अधिकार उपयोग गर्ने अवसर पनि भएकाले सबैलाई मतदान गरी आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न आग्रह गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले चुनावको सबै तयारी पूरा भएको, मतपत्र, मतपेटिका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी पनि पुगिसकेकाले कुनै डर नमानी चुनावमा भाग लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एक दिन दुःख सहेर भएपनि योग्य उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सबै मतदातालाई अनुरोध गर्नुभयो ।
आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने महान् पर्वको रूपमा मनाउन र असार १५ गते रोपाइँ पर्व मनाउन आग्रह गर्नुभयो । पहिलो चरणको चुनावमाभन्दा बुधबारको चुनावमा धेरै मतदाता सहभागी हुने आयोगले विश्वास लिएको पनि बताउनुभयो । बुधबार बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म लाइनमा बसेका मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् ।
आयोगले भोट खसाल्न मतदाता परिचय पत्र बोकेर सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा जानुपर्ने तर कुनै कारणले परिचय पत्र छुटे वा नलगे आफ्नो फोटो भएका अरु सरकारी कागजात देखाएर पनिमतदान गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको जनाएको छ । आयोगले सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाइएकाले ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ । सरकारले चुनाव हुने १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
१५ हजार ३८ जना प्रतिनिधि चयनका लागि ६२ हजार ४ सय ८ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धा रहेको आयोगले जनाएको छ । तीन प्रदेशका ३५ जिल्लामा हुने मतदानमा ६४ लाख ३२ हजार ७ सात ६५ मतदाता छन् । चुनावमा सुरक्षाकर्मीबाहेक ६६ हजार ९ सय कर्मचारी खटिएका छन् । बुधबार १ महानगरपालिका, ७ उपमहानगरपालिका १ सय ११ नगरपालिका र २ सय १५ गाउँपालिका गरी जम्मा ३ सय ३४ स्थानीय तहमा चुनाव हुँदै छ । चुनावको परिवेक्षणका लागि ४८ संस्थाका ६ हजार ७ सय ३३ जना पर्यवेक्षक खटिनेछन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा ४१ जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुनिएका छन् ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार १३, २०७४ 9:14:06 PM